AmaNgqina Anceda Amaxhoba Eengxwabangxwaba ZaseCongo
EDemocratic Republic of the Congo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiBhulu IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiYoruba
UBelinda (ifani yakhe ayichazwa kuba kukhuselwa yena) kunye nabantwana bakhe abathathu kwisibhedlele esiseDundo, eAngola. Umyeni wakhe wabulawa eCongo, ibe omnye umntwana wakhe ulahlekile. UBelinda nentwazana yakhe ena-2, bonzakaliswa ziimbumbulu, nto leyo ebangele ukuba intwazana yakhe inqunyulwe umlenze. Ezinye iintombi zakhe zonzakaliswe ngucelemba.
EKINSHASA, eCongo—AmaNgqina KaYehova aye aphathela amanye amaNgqina izinto zokuwanceda ibe awakhuthaze nangeBhayibhile kuba eye ahlaselwa kumlo obuseKasai, eDemocratic Republic of the Congo. Imilo yobuzwe, oophumasilwe abaxhobileyo nezidubedube zaseCongo zibangele kwakho abantu abaziimbacu abangaphaya kwabayi-1.3 miliyoni, kuquka abangaphaya kwabayi-30 000 abasuka eKasai abaye babalekela eAngola. Uninzi lwezi mbacu luye lwahlaselwa ngolunya ibe ukufika kwabo eAngola kuye kwafuneka benyangiwe kuba betshile, benamanxeba oocelemba neembumbulu. Iingxelo zakutshanje zibonisa ukuba kwiimbacu eziseAngola, ezingaphezu kweziyi-870 ngamaNgqina kaYehova nabantwana babo, ibe ayi-10 onzakeleyo. Okubuhlungu kukuba, amaNgqina KaYehova ayi-22 aye asweleka.
Umzalwana osuka kwiofisi yesebe yamaNgqina KaYehova eAngola utyelele iqela labadala abasuka eAngola naseCongo, abanye kubo baziimbacu.
URobert Elongo, isithethi samaNgqina KaYehova esikwiofisi yesebe eKinshasa sithi: “Sibuhlungu kuba kuye kwasweleka abantu abaninzi ngenxa yalo mlo, ngokukodwa kuba ingabantwana. Abanye baye bahlaselwa kuba nje bebekwindawo yomlo. Sikuxhalabele kakhulu ukukhuseleka kwabazalwana noodade wethu ibe sibacebisile ukuba balumke. Iofisi yesebe yamaNgqina KaYehova eseAngola, yenza konke okusemandleni ayo ukuzisa izinto ezifunekayo nokubathuthuzela ngeZibhalo.”
Iimbacu ebezibalekele emahlathini kumlo waseCongo, zakha indlu.
AmaNgqina KaYehova aseAngola naseCongo aye alungiselela iikomiti zokunceda ngexesha lentlekele ukuze zincede. Iimbacu ziye zaselwa izinto njengeengubo, impahla, ukutya, iinethi ezikhusela kwiingcongconi, izihlangu namayeza. Ugqirha oliNgqina LikaYehova uye waya kwinkampu yeembacu waza wanyanga eziyi-135 ebekufuneka zincedwe ngokukhawuleza.
Ukongezelela, abazalwana abasuka kwiofisi yesebe yaseAngola naseCongo baye baya kwiimbacu ukuze bazikhuthaze ngeentetho ezisekelwe eBhayibhileni. Nangona eAngola kuthethwa isiPhuthukezi, ukuze iimbacu zive, inkonzo iye yaqhutywa ngesiTshiluba, olona lwimi luthethwayo kwezine eCongo, njengoko sibona kumfanekiso osekuqaleni.
EDemocratic Republic of the Congo: URobert Elongo, +243-81-555-1000